मदन लम्साल | गृहपृष्ठ
मदन लम्साल Articles 41
विश्वकपको ज्वरोमा खरो सीडीओ
विश्वकप फूटबलको ज्वरोले विश्वका मानिसलाई हिजोदेखि राम्रै समातेको छ । नेपाल यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । गत १ हप्तादेखि नै के शहर के गाउँ, सबैतिर फूटबल जर्सीमय देखिन थालेका छन् । शहरका कपडा पसल विभिन्न देशका जर्सीले भरिएका छन् । अझ निजीक्षेत्रका कार्यालयमा कर्मचारीहरु अर्जेण्टिना, स्पेन, जर्मनी, ब्राजिल, फ्रान्सलगायतका देशका जर्सीमा आउन थालेका छन् । हरेक अफिस खेल मैदानभन्दा कम नदेखिने भइसकेका छन् । कुनै कर्मचारी कुनै खेलाडीका फ्यान कुनै कर्मचारी कु...	बिस्तृतमा
मन्त्रीहरू काममा जुटे
वातावरणमन्त्री कसको गाडीमा धूवाँ आइरा’छ भनेर निरीक्षण गर्न व्यस्त छन् । गृहमन्त्री ठेकेदारहरुलाई समाउँदै थुन्दै छन् । आपूर्तिमन्त्री किसानको पैसा तिर् भन्दै चिनी मिल मालिकलाई थर्काउँदै छन् । अर्थमन्त्री बढी कर कसरी उठाउने योजना बुन्दै छन्, आयोग बनाउँदै छन् । यसरी मन्त्रीहरु जनताका काममा खटिइनै रहेका छन् । त्यसो त जनताका लागि भनेर नेताहरु दशकौंदेखि लडिरहेका छन् । दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । कहिले क्रान्ति गरे, कहिले शान्ति छरे । कुनै बेला जनवादी ग...	बिस्तृतमा
वाह ! वा हावा बजेट ?
सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो, ल्यायो । विपक्षका लागि यो हावादारी भयो, पक्षका लागि हाहाकारी । प्रदेश सरकारहरुले यो बजेटलाई प्रदेशका लागि नभई सङ्घका लागि मात्र भयो भन्ने आरोप लगाए । यो बजेट सङ्घीय सरकारले ल्याएको सङ्घीय बजेट हो भन्ने बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरे प्रदेशीहरुले । अझ कतिपयले यसलाई परम्परागत बजेटको बिल्ला भिराए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले ब्रिफकेसबाट निकालेर बजेट वक्तव्य पढ्ने चलन छाडेर यी अर्थमन्त्रीले त्यत्रो क्रान्तिकारी तरीकाले छालाको ब्य...	बिस्तृतमा
नीकाको विरोध किन ?
दुई तिहाइको वाम सरकारले बजेटअघि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम (नीका) ल्याएको मात्र के थियो, विरोधीहरूले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न धुँवाधार विरोध शुरू गरिहाले । विरोध नगरून् पनि किन ? किनकि त्यस्तो लामो नीका बनाउन जरुरी नै थिएन । खुरुक्क नीति समाजवाद ल्याउने र कार्यक्रममा पनि समाजवाद ल्याउने भनेर दुई वाक्य पढ्द्या भए पुगिहाल्थ्यो । आखिर कुरो पनि त्यस्तै त्यस्तै नै थियो । नभए विगतका वाम र हाम दुवै प्रकारका सरकारहरूले ल्याएकै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार...	बिस्तृतमा
गफै त हो ससुरा !
मोदी आए, गए । हामी नेपालीलाई एक महीनाको गफ गर्ने खुराक पुगिहाल्यो । मोदीले पनि गफै गरेका हुन् । हाम्रा नेताले गर्ने पनि गफै हुन् । पहिलेकै पूरा भएका छैनन् वाचाहरू । कति थपिएका छन् नयाँ नया प्रतिबद्धताहरु । पहिले दिन्छु भनेका थुप्रै कुरा दिएका छैनन् मोदीले । किनभने ती सबै गफै थिए । फेरि नयाँ गफ दिएर गएका छन् । भन्नेलाई पनि थाहा छ, ती वाचा पूरा गर्नका लागि थिएनन् । सुन्नेलाई पनि थाहा छ, ती प्रायः सबै गफ हुन् । गर्ने त गफै न हो । काम त कसले पो गर्‍य...	बिस्तृतमा
आज मोदी आउने रे । आश्वासनका पोका ल्याउने रे । नागरिक अभिनन्दन हुने रे । उनले पनि नेपालीजनका मन छुने रे । लौ है, हाम्रा लागि नभए पनि अतिथिका लागि शहर, मन्दिर सफा राख्नू । सडक खुल्ला राख्नू । सुरक्षा कडा पार्नू । मन्दिरमा अरु मानिस जाने बाटो रोक्नू । पहाडलाई चुप राख्नू । नाकाबन्दी वा सीमारेखाका कुरा नकोट्याउनू । हाँसेरै भए पनि निहुरेरै आँशु पिउनू । पुराना घाउ आफै सिउनू । बाहिरबाटै सही स्वाभिमान देखिएरै जिउनू । लाम लागेर सलाम ठोक्नू । सके उनको प्रशस...	बिस्तृतमा
पूँजीवाद अर्थात् क्यापिटलिजम वा बजार अर्थतन्त्र । यस्तो अर्थतन्त्र जहाँ क्यापिटल गुड्स व्यक्ति वा प्राइभेट व्यावसायिक संस्थाहरुको स्वामित्वमा हुन्छ । सामान तथा सेवाको उत्पादन बजारको आवश्यकता खासगरी माग र आपूर्तिका आधारमा हुन्छ । केन्द्रबाट योजना गरेर, सरकारले निर्देशन दिएर पूँजीवाद चल्दैन । तर, यो विकसित विश्वमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ नि, नेपालमा चाहिँ होइन । विश्वमा पूँजीवाद भनेपछि त्यै एउटै पूँजीवाद हो । तर, नेपालमा चाहिँ होइन नि । नेपालमा पूँजीव...	बिस्तृतमा
हिजोआज जो पनि सरकारलाई थर्काउन खोज्छन् बा ! हुँदाहुँदा ड्राइभर र खलासीसम्मले पनि थर्काउन थालेका छन् । चिया पसलदेखि फेसबुक, ट्वीटरका वालसम्ममा सरकारले यो गर्नुपर्छ वा त्यो गर्नुपर्छ भनेर थर्काउनेहरू त कति छन् कति ! सरकार पनि के कम ? पहिलोपटक थर्काउनेलाई राम्रै जवाफ फर्कायो र यातायातको सिण्डिकेट कागजमा हटायो । सडकबाट पनि हटाउला नै । तर, सिंहदरबारदेखि बागदरबारसम्म, लालदरबार (अर्थात् पेरिसडाँडा दरबार) देखि बल्खु दरबार र सानेपा दरबारसहित लागेर लादेको...	बिस्तृतमा
यसपालि पनि प्रम ओली पहिले चीनतिर नगई भारततिरै गए । के गर्नु काठमाडौंमा जाडो अझै सकिएको छैन यो वर्ष । बालुवाटारबाट निस्केपछि पाइला त उत्तरभन्दा दक्षिणतिरै जाँदो रै’छ । घाम दक्षिणकै प्यारो । तामझाम पनि दक्षिणकै आकर्षक । तर, अब यता गर्मी बढेपछि प्रम अब छिटै चीन भ्रमणमा पक्कै निस्कनेछन् । प्रम ओलीले भनेजस्तै भारत भ्रमण अत्यन्त सफल रह्यो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । किनकि यात्राका क्रममा कुनै असुविधा वा अप्रिय घटना केही भएन । विगतमा पनि सबै प्रमको भ्रम...	बिस्तृतमा
चारैतिरबाट माग आएपछि अर्थमन्त्री (अम)ले श्वेतपत्र भनेर एउटा वक्तव्य निकाले । श्वेत अर्थात् सेतो । तर वास्तवमा त्यो त कालोपत्र भनौं वा श्यामपत्र पो रहेछ । किनकि श्वेतपत्रमा व्यापारी, लगानीकर्ता, बैङ्क र आम जनताको मनोबल उकास्ने सेतो, सफा कुरा नआएर मनै अँध्यारो हुनेगरी आशा ओराल्ने कुरो पो आयो त । कालो मनले यस्तो ल्याएका त पक्कै होइनन् होला अमले । पहिला निराश बनाएर पछि बजेट बनाउँदा ह्वात्तै खुशी दिएको देखाउन पो अमले यो नीति लिएका हुन् कि ! यसरी श्वेत...	बिस्तृतमा